Nri jọrọ njọ, ọ dị mma: Obodo nri kacha mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Nri jọrọ njọ, ọ dị mma: Obodo nri kacha mma
Na-agbasa News Travel • culinary • Denmark na -agbasa akụkọ • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị a bụ obodo kachasị mma maka nri na 2019, dị ka David Chang si kwuo
Dabere na onye isi nri David Chang, onye ọbịa nke Netflix na-ewu ewu "Ihe Ọjọọ Na-atọ icioustọ," ndị a bụ nhọrọ kachasị elu ya maka obodo nri kacha mma ileta na 2019
Chang kpọrọ obodo a "oke ọkụ ugbu a," ma na-atụ aro ka ndị ọbịa nwalee tacos al pastor, tlacoyos (nri n'okporo ámá nke ejiri ọka na-acha anụnụ anụnụ na anụ ezi anụ ezi), na mezcal, nke bụ otu n'ime ọpụrụiche Mexico.
Na-esote, ọ na-eche na nri na Tokyo na obodo ndị ọzọ dị obere na Japan, dị ka Okinawa na Kansai, na-echere ka ndị njem nleta chọpụta ha. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-akpakọrịta nri Japanese na sushi, nri ya bara ọgaranya karịa nke ahụ. Chang na-atụ aro ịnwale udod noodles (ụdị dị iche iche site na mpaghara ruo mpaghara) na mmanya na-egbu egbu a na-akpọ awamori, nke sitere na osikapa.
Ihe kacha ịtụnanya ya nwere ike ịbụ Copenhagen na Denmark. Obodo a bụ ụlọ nke otu n'ime ụlọ nri kacha mma n'ụwa, bụ Noma, mana Chang na-ebu amụma na ndị fọdụrụ na mpaghara ahụ ga-agabiga nri nri ya na 2019. Ọ na-atụ aro ka ị gaa Stockholm na Olso, ebe ị nwere ike ịlele sandwiches oporo, nduku dumplings, na eghe eghe ahihia.
Ndị njem gị niile na ndị na-eri ihe ugbu a nwere ụzọ gị maka afọ ọhụrụ: Gaa n'obodo ọhụrụ, ikekwe nke na-apụtaghị na akwụkwọ ntuziaka ọ bụla, ma nwalee efere ị na-agaghị ahụ n'ụlọ. A sị ka e kwuwe, David Chang n'onwe ya kwadoro ọrụ ndị a na-eme njem na nri.
celebrity isi obodo Copenhagen nri Na-atọ ụtọ Denmark ọṅụṅụ chọta nri njem njem nri Gaba! mma home usu Hot Japan Mexico Mexico City Afọ ọhụrụ okinawa ewu ewu na-ebu amụma kwadoro Renaissance ụlọ oriri na ọṅụṅụ osikapa nri show ọpụrụiche Stockholm super Mpaghara Tokyo agbalị nleta